❓ကလေးကို ကော်ဖီတိုက်မလား❓ – Burmese Baby
Web Master | September 25, 2018 | Health | Comments
❗️ကမ္ဘာမှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကော်ဖီ အသောက်လွန်တာကို စိုးရိမ်လို့ သုသေတနပြုသူများက စာရင်းပြုကြည့်တော့ ပိုပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ၂-၃ နှစ်အရွယ် ကလေးများကို ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည် တိုက်နေကြခြင်းပါ။
❗️အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကလေးငယ်များနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များစွာကို စနစ်တကျ လေ့လာကြည့်တော့ ကော်ဖီ “လွန်ကဲစွာသောက်တဲ့” ကလေးများဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပြဿနာတွေလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ကလေးကိုယ်ခန္ဓာက အိပ်စက်ချိန်မှာ ကြီးထွားမှု ရပါတယ်။ ကော်ဖီက ကြီးထွားမှုကို တိုက်ရိုက်မထိခိုက်နိုင်ပေမယ့် အအိပ်နည်းရင် ကြီးထွားမှု နဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု ထိခိုက်ပါတယ်။ ပညာသင်ကြားရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
🚫(၂) ဂျီကျလွန်းခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဒေါသကြီးခြင်း
စိတ်တို စိတ်ကြီးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ပျော်ရွှင်ချိန်လျော့နည်းပြီး အကောင်းမြင်စိတ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
🚫(၃) ကော်ဖီဖျော်ရာတွင်သုံးသော သကြားဓာတ်ကြောင့် ကလေး ဗိုက်မဆာဘဲ အာဟာရဖြစ်စေသော အခြား စားစရာများ စားသုံးခြင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
🚫(၄) ကော်ဖီမှာပါသော အက်စစ်ဓာတ်က ကလေးသွားရဲ့ အပေါ်လွှာကို တိုက်စားပစ်ပြီး သွားပိုးစားခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူကြီးသွားရဲ့ အပေါ်လွှာက ကလေးထက် ပိုခိုင်မာတော့ လူကြီးမှာတော့ ကော်ဖီကြောင့် သွားထိခိုက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။
🚫(၅) ကော်ဖီသောက်ရင် ပုံမှန်သွားသင့်တာထက် ဆီးသွားများတတ်ပါတယ်။ ဆီးသွားများလွန်းရင် ကယ်စီယမ်ဓာတ်အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကယ်စီယမ်က အရိုးဖြစ်တည်ဖို့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သတ္တုတစ်မျိုးပါ။
🚫(၆) ကော်ဖီကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးပေါင် အနည်းငယ်တက်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
✅အပေါ်မှာရှင်းပြတဲ့ အချက်အလက်များက ကလေးများ ကော်ဖီလွန်ကဲစွာသောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးများပါ။ ဒီမှာ လူကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော် ကျွန်မ ကော်ဖီ အများကြီးသောက်တာ ဒီလောက်မဆိုးပါဘူးလို့ ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေး ဦးနှောက်၊ ကလေးကိုယ်ခန္ဓာက လူကြီးလောက် ခံနိုင်ရည်မရှိသေးပါ။
✅ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကြံပြုလိုတာကတော့ ကလေး ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာ တည်ငြိမ်စွာ ကြီးထွားဖွံဖြိုးဖို့ ကေဖင်းပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ အချိုရည်များ၊ ကိုကာကိုလာ၊ ပပ်စီ၊ ကျွဲရိုင်း စသော သောက်ဖွယ်များကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ရှားခြင်းက စိတ်အချရဆုံးဖြစ်မှာပါ။
1. Australia institute of food-safety
2. Nutrition guidelines from Royal Children Hospital, Victoria, Australia
3. Health Canada, The Federal Department.